ZITHATHELE F-16 Ukulwa Falcon FSX & P3D - Rikoooo
F-16 Ukulwa Falcon FSX & P3D
Usayizi 76 MB
Play 53 181
Zadalwa 19-09-2014 02: 00: 00
Kushintshwe 30-05-2015 19: 13: 05
Wonderful add-on aguqulwa ukusebenza ngokuphelele ne FSX kanye P3D, Sokuzenzela by Kirk Olsson kuyinto ephawulekayo. Lokhu model (Viper) iza nazo 22 yokwenza kanye 4 models. umphumela Afterburner futhi animated izingxenye asekhona, inkambiso imisindo, Izikali, abanikeze asebenza nabo virtual, HUD, 2D Panel.
The General Dynamics F-16 Ukulwa Falcon kuyinto fighter multirole akhiwa United States phakathi 1970s Wayala ngamaphesenti angaphezu kuka 20 amazwe, wakha ngaphansi kwelayisensi eTurkey, South Korea neqembu amazwe amane NATO F-16 in 2013 iyona fighter kakhulu ukusetshenziswa emhlabeni, ngokokunye ukulinganisela, 2,309 izindiza enkonzweni ngo 2012 noma 15% azo zonke izindiza combat ezisezweni. Ikhophi 4 500th wakhululwa ngo-Ephreli 2012 futhi ukukhiqiza kulindeleke ukuba uqhubeke okungenani kuze kube yilapho 2017 emazweni angaphandle. (Wikipedia)
1. ungezelele Ngokugcwele enezinto (F8).
2. Kusebenze yokupaka ukubopha futhi ibenze mpintsha ukuze amandla ngokugcwele. Bamba ukubopha for 2-3 imizuzwana (ukwakha amandla).
3. Release ukubopha futhi azungeze 125-135 ifindo.
1. Yehlisa ijubane ukuze 340 ifindo nge airbrake (/).
2. Nweba enezinto okugcwele (F8). Lungisa ngejubane mpintsha futhi airbrake ukuze uhlale glide eyehlelayo.
3. Ihlelo evulekile azungeze 200 ifindo.
4. Ngaphambi nje evulekile at mayelana 165 ifindo ukunweba airbrake (/), pitch ekhaleni up
futhi wandise mpintsha ukubambezela uzalo.
5. Sika mpintsha futhi touchdown phakathi 145-155 ifindo.
6. Bamba omuhle impumulo pitch kuze ijubane lwase lwenziwe lwaba phakathi 130-140 ifindo.
Bese kancane ukwehlisa ekhaleni futhi sisebenzise ukubopha phakathi 100-120 ifindo.
F-16 Ukulwa Falcon FSX & P3D Thwebula
Incazelo 24 969
Incazelo 42 344